တရုတ်စံ feeder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Baiyi
အသွင်အပြင်:ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမြင့်မားခြင်း၊ လည်ပတ်မှုလွယ်ကူခြင်း၊ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ စက္ကူသေတ္တာ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်စသည်တို့အတွက်ဝတ်စုံ။ TIJ ပရင်တာ၊ CIJ ပရင်တာစသည်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်။ ရနိုင်သည်။ စာသား၊
စီးရီး Standard Standard လမ်းခွဲသည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်သောနို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး、 အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်းအပါအဝင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းကိုနားလည်ရန်ပွတ်တိုက်အားနိယာမကိုချမှတ်သည်။ ၎င်းသည်သံမဏိပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ။ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်သက်သာစေရန်အသုံး ၀ င်သည့်ကြမ်းခင်း - ကြမ်းခင်းတပ်ဆင်ထားသည်။ အစာကျွေးခြင်းဒီဇိုင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်၎င်း၏မွေးစားနိုင်စွမ်းကိုအားကောင်းစေသည်။ ၀ ယ်သူကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိစေပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေမည့် optional function များစွာရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်သောသင့်လျော်သောထုတ်ကုန် - စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ စက္ကူသေတ္တာ၊ သာမန်ပလတ်စတစ်အိတ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဤအစာကျွေးခြင်းကို CIJ ပရင်တာ၊ TIJ ပရင်တာ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစနစ်၊
ထို့အပြင်၊ ပွတ်တိုက်အားလျှော့ချသည့်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လူတို့သည်စက်ကိုမရပ်ဘဲကုန်ပစ္စည်းကိုထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်အားခါးပတ်နှင့်နီးကပ်စွာလည်ပတ်စေသည်။ ချောခြင်း၊ ရွေ့ခြင်းမရှိသော non မျက်နှာပြင်သည်ပြားနေပြီးပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားနည်းပညာများအတွက်နောက်ကွယ်တွင်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်တာဝါဒီဇိုင်းပါသောအော်တိုစုဆောင်းမှုစနစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတစ် ဦး ချင်းစီကိုစုစည်းပြီးစနစ်တကျစုဆောင်းသည်။
၁။ KN95 / KF94 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း
1. အတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 1700 * 640 * 800mm
2. အလေးချိန်: 65KG
3. ဗို့အား: 220VAC 50-60HZ
4. ပါဝါ: အကြောင်းကို 500W
၅။ အမြန်နှုန်း - ၀-၃၀၀ pcs / min (ထုတ်ကုန် ၁၀၀ မီလီမီတာဟုယူဆသည်)
၆။ ခါးပတ်မြန်နှုန်း - ၀-၆၀ မီတာ / မိနစ် (ချိန်ညှိနိုင်သည်)
7. ရရှိနိုင်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: (60-300) * (60-280) * 0.1-3mm
၈။ မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း - ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း (သို့) brushless DC မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း
9. မော်တာ: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် Brushless DC ကမော်တာ
၁၀။ ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန် - စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်၊ ကတ်၊
11. စက်ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း: သံမဏိ
၁၂။ တပ်ဆင်မှုပုံစံ - သီးခြားတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကြမ်းခင်းပုံစံ
13. optional ကို function ကို: လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်း, Auto- စုဆောင်းခြင်း